Yakanakisa Black Friday zvibvumirano zve2021 | la-manette.com
27 novembre 2021 ndima Pretty Trawl
Madhiri akanakisa ekukubatsira kuronga kutenga kwako
Black Friday yasvika! Chiitiko chegore negore chekutengesa chave mwaka wega uye chichamhanya kuburikidza neCyber ​​​​Monday, sezvo vatengesi vanoenda kusango vachiedza kudarika mumwe nemumwe nezvidzoreso zvakakura, kutengesa kweflash uye kuderedzwa chaiko.
Tichange tichigara tichivandudza runyorwa rwedu rweakanakisa Black Friday madhiri, ane akanakisa kubva kuAmazon, Apple, Samsung, nezvimwe. Pazasi ndiko kusarudzwa kwedu kwepamusoro kutengesa tekinoroji uye zvemagetsi edhita kubva kune vese vatengesi vakuru nevagadziri.
Kazhinji € 719, ikozvino € 569.
Samsung's Galaxy Tab 7 ndeimwe yemapiritsi akanakisa Android yemusika.
2.ENERGON 2 Mini projector 1080p
Kazhinji € 289,99, ikozvino € 244,49
Iyo ENERGON 2 Mini Projector inzira huru yekuronga husiku hwemufirimu zvisingadhure, uye inogona kudhirowa 100-inch skrini zviri nyore.
3. Nintendo Chinja Neon + Mario Kart 8 Deluxe
Kazhinji 479,99 € yekoni chete, ikozvino 310,58 € naMario Kart 8.
Nintendo's yakanakisa Shandura koni yave yakaoma kuuya nemwaka uno wezororo, asi Best Buy yakachengeta zvivimbiso zvayo neiyi bundle ine yedu yaunofarira Shandura mutambo, Mario Kart 8.
4. Apple MacBook Mhepo (2020)
Kazhinji 1129 €, ikozvino 999 € .
Zvidzikiso zvakadzikiswa pazvigadzirwa zveApple hazvishamisi, saka mhanya uye usafambe kune yazvino vhezheni yeMacBook Air, iyo muongorori wedu akati "inosiya makwikwi muguruva", uye inotungamira paki. yedu runyorwa rweakanakisa laptops. .
Lenovo Legion 5 ongororo: Laptop yemitambo inopetwa kaviri sePC yebasa
5. Roku Streambar
Kazhinji € 44,99, ikozvino € 21,99
Iyo Roku Ultra ndeye kumhanyira 4K ine simba uye inoshanda zvakasiyana-siyana, yakatakurwa nekuwedzera, imwe yedzakanakisa uye nzira dziri nyore dzekuwana ruzhinji rwekutepfenyura sarudzo pane chero TV (uye kurudziro yakasimba yekucheka tambo zvakanaka. uye kuchengetedza mari).
6. Wireless Bluetooth Earphones, SoundPEATS
Kazhinji € 55.99, ikozvino € 34,49.
Mhanya, bhasikoro, famba uye taura neaya mahedhifoni ekudzimisa ruzha anobatana zvisina musono uye izvo ongororo dzedu dzinoti kutenga kukuru kune iPhone uye Android smartphone varidzi. Kana yangotengwa, zvichava nyore kusateerera kune wese munhu panguva yezororo.
Iwo 7 Akanakisa Noise Kanzura (ANC) Mahedhifoni
7. HP Portable Photo Printer
Kazhinji 119.99 €, ikozvino 79.99 €
L 'MAPURINITSI Instant Photo kubva kuHP inobatanidza kufoni yako kuburikidza neBluetooth uye inoita kuti iwe ugadzire ipapo pabepa rinonamira-backback, chero kwaunenge uri. Idiki zvekukwana mubhegi rako kwehusiku.
Uyu ndiwo mutengo wakaderera watakaona.
8. DJI Mavic mini drone
Kazhinji 499 €, ikozvino 306 €
Iyo Mavic Mini ndiyo yakanakisa drone yevanotanga, uye kit iyi ine zvese zvaunoda, kusanganisira mabhatiri matatu, matatu mapeya ezvipiritsi, zvimiti zvekudzora uye propeller guard.
Verenga zvakare: Akanakisa Alternatives kune iTunes yeMac neWindows
9. Samsung Odyssey G9 49 ″ Ultra-wide gaming monitor
Kazhinji € 1499, ikozvino € 1248.
Kana iwe uri mutambi anofarira kana uchingoda iyo yekupedzisira yebasa remumba yekutarisa, saka Samsung's hombe Odyssey G9 ndeyako. Mafungiro ayo anokatyamadza, uye kana dhesiki rako rakakura zvakakwana, kutenga kukuru.
10. Lenovo Chromebook Flex 3
Kazhinji 349 €, ikozvino 229 €
Iyo yakakura bhajeti Chromebook, iyo Flex 3 inopa nyore kuchinjika pakati pepiritsi modhi ine inoenderana Lenovo peni yedhijitari (asi iwe uchafanirwa kuitenga zvakasiyana), uye yenguva dzose laptop mode. Hanzvadzi yake hombe, iyo Flex 5, ndeimwe yedu yepamusoro Chromebook mapikicha.
Asus Chromebook C223: Laptop Inotengeka Yakakwana YeVadzidzi
11. Sony WH-1000XM3 Wireless Noise Kudzima Mahedhifoni
Kazhinji € 380, ikozvino € 199
Amazon parizvino ine yakanakisa Sony WH-1000XM3 mahedhifoni ari kutengeswa nemutengo wakakura wemadhora zana nemakumi masere nerimwe, mutengo unoshamisa weimwe yepamusoro peya yekudzima ruzha pamusika nhasi. Imwe yeakanakisa uye akanyanya kugadzikana peya yeruzha kudzima mahedhifoni aunogona kutenga ”, ine ruzha rwemhando uye hupenyu hurefu hwebhatiri.
Sony's ruzha-kudzima mahedhifoni ndeimwe yemhando dzedu dzepamusoro, uye kutengeserana pamutengo uyu - ndivo vakakwana vanofamba navo.
12. CHIQ U55H7A, 55 Inch smart TV
Kazhinji € 499,99, ikozvino € 435.
Yakanakisa smart TV, iyo CHIQ U55H55A's 7-inch skrini yakanakira kutenderera nekutamba, uye ine yakavakirwa-mukati Google Mubatsiri.
13. Fire TV Stick uye Alexa voice remote control
Kazhinji 18,99 €, ikozvino 11 €
Unoda kuwedzera hungwaru kuTV yekare? Kana kuwana toni yesarudzo dzekushambadzira pane chero mudziyo une chiteshi HDMI kana USB? Iyo Fire TV Stick ndiyo yakanaka uye inokwanisika mhinduro, kunyanya sezvo ichingoda € 20 chete. Inogona kudzora TV yako, uye inouya ne Alexa.
5 akanakisa mutambo vatongi veAmazon Fire TV
14. Amazon eero 6 dual-band mesh Wi-Fi 6 system (3-pack, imwe eero 6 router + maviri eero 6 extensions)
Kazhinji € 469, ikozvino € 246.
Mesh Wi-Fi routers anoshanda pamwe chete kuti akupe iwe yekukurumidza internet yekubatanidza kumba kwako. Iyi paki ye3 eero routers yakanakira dzimba hombe nekuti inobvisa matema. Ndiyo zvakare iri nyore kuisa uye kushandisa.
15. Dell Inspiron 15 Laptop
Kazhinji 849 €, ikozvino 786 €
Dell laptops anogara ari pamusoro rondedzero yeakanakisa malaptops, uye iyi Inspiron ine 15,6-inch skrini, uye yakanakira mabasa akakosha senge kubhurawuza uye kugadzirisa mazwi.
16. Echo Dot (chizvarwa chechina)
Kazhinji 69 €, ikozvino 39 €
Verenga zvakare: Iyo inonyanya kuridzwa mhando dzemitambo paPS4
Tamba imba yako yakangwara neAmazon yakanakisa 4th Generation Echo Dot. Uyu mutauri mudiki akangwara ndiyo yakachipa uye iri nyore nzira yekuunza Alexa, Amazon's smart mubatsiri, mumba mako.
17. Samsung QN90A 75inch TV
Kazhinji € 1099, ikozvino € 790.
Iyi ndeimwe yemhando dzedu dzepamusoro dzeTV, uye muongorori wedu akati, "Samsung QN90A imwe yeTV akanakisa anowanikwa pamusika, uye ndiyo yakakwirisa kune chero munhu ari kutsvaga kuigadzira patsva." Chiitiko chemufirimu muimba yavo yekutandarira. "
Nhungamiro kune akanakisa 8K maTV e2021 - iyo 8k TV yemitambo
Iwo mashanu akanakisa 5k emitambo maTV
18. Linksys Dual Band Gigabit Router
Kazhinji 149,99 €, ikozvino 99,14 €
Nguva yezororo ndiyo nguva yakakosha yeinternet-inokurumidza kukurumidza, ine mitambo yese nemavhidhiyo ekutepfenyura TV neinternet izvo vanhu vanoshandisa nehasha munguva yavo yemahara. Ita shuwa kuti wagadzirira kuendesa iyo data yese neiyi yakanakisa Linksys gigabit router, yakanyatsogadzirirwa kubata yakakwira bandwidth mitoro uye akawanda maturusi.
Iwo akanakisa ane simba asina waya ma routers
19.Fitbit Charge 4
Kazhinji 150 € Iye zvino 69
Yedu yepamusoro yekusarudza yekusimba tracker yaona mutengo wayo uchidonha. Kune maFitbits matsva uye epamberi kunze uko, asi iyi inoita zvese zvaunoda, uye yakakura-inotenderedza.
20. eufy Chengetedzo vhidhiyo bhero repamukova
Kazhinji 199 € ikozvino 139 €
Zvakawanda kubva kune eufy vhidhiyo bhero repamukova iro nyanzvi dzedu dzinoti ndiyo imwe yedzakanakisa nzira dzekuwana yakachengeteka vhidhiyo bhero repamusuwo pasina kubhadhara mari dzepamwedzi.
21. Steelseries Aerox 3 Wireless Gaming Mouse
Kazhinji 109 €, ikozvino 89 €
Iyo Steelseries Aerox 3 ine hupenyu hwebhatiri hwekusvika maawa mazana maviri, saka unogona kutamba kwemaawa. Uye, nekuramba kwayo kwemvura, iwe unozogona kunakidzwa nemutambo uye snack pasina kunetseka. Iyi mbeva isingaremi inowanikwa nemavara maviri.
22. Belkin Wireless Kuchaja Mutauri
Kazhinji 59.99 €, ikozvino 40 €
Kuparadzirwa kwe mumhanzi Kutenderera kubva pafoni yako kunogona kupedza bhatiri rako nekukasira, asi iyi sipika foni uye charger yerunhare zvakasanganiswa zvinodzivirira kuti zvisaitike. Ita kuti mutambo ugare usiku hwose.
Onawo: Iwo mana akanakisa asina waya smartphone majaja uye anokwirisa emota muna 4
23. Kindle Pepawhite
Kazhinji 130 €, ikozvino 90
Pakati pezvinopihwa pamidziyo yeAmazon iyi Black Friday ndiyo inokunda inopihwa pane isingaremi, isina mvura, uye isina glare-isina Kindle Paperwhite.
23. OnePlus 9 Pro Foni
Kazhinji 999 €, ikozvino 799 €
OnePlus yakagara yakazvimisikidza seimwe inoshanda kune vatambi vakuru mu Android smartphone nzvimbo. Iyo OnePlus 9 uye OnePlus 9 Pro parizvino iri kutengeswa, zvichiita kuti ive iri nani kutenga.
24. Samsung Galaxy Buds Rarama
Kazhinji 191.59 €, ikozvino 92,59 €
Nzeve dzinoshamisa dzeSamsung, iyo Galaxy Buds Live, tora mutero wakakura weBlack Friday. Nekusvika maawa matanhatu eruzha nekukanzura ruzha uye maawa makumi maviri nemana nekesi, unogona kunakidzwa nemimhanzi zuva rese. Amazon inopa mutengo wakafanana.
Verenga zvakare: TOP gumi akanakisa Pandora Bhokisi arcade zviteshi
25. FitBit Versa 2
Kazhinji 199.99 €, ikozvino 109.99 €
Nemazuva mana ehupenyu hwebhatiri uye kugona kuchengeta nziyo dzinosvika mazana matatu, Versa 300 isarudzo yakanaka kune inotakurika smart kifaa. Kuteedzera muviri kwakakura zvakare, uye muongorori wedu Jason akada ratidziro yewachi muyedzo yake. Kana iwe wakamirira kutenga imwe, ikozvino ndiyo nguva.
26. Sony WF-1000XM3 / B Wireless In-Ear Headphones
Kazhinji 250 €, ikozvino 129 €
Les wireless maearphones kubva kuSony zvine nharo mamwe akanakisa kutenderedza, uye nemutengo uyu, ivo vachaenda nekukurumidza. Kuchaja kwemaminetsi gumi kunovimbisa 90 maminetsi enguva yekutamba, uye ivo vanouya ne Alexa izwi rekudzora kune isina musono Amazon smart ruzivo.
Ndeipi Black Friday 2021?
Black Friday ichaitika munaNovember 26, 2021, uye Cyber ​​​​Monday ichatevera zvakanyanya munaNovember 29. Sekutsanangura kunoita chinyorwa chedu nezvenhoroondo yeBlack Friday, izwi iri rakatanga kuPhiladelphia, uko mapurisa akarigadzira kureva mhirizhonga yakakonzerwa nekuwanda kwevatsigiri muguta zuva rakatevera Thanksgiving, musangano usati waitwa. nhabvu yepagore pakati pemauto. neuto regungwa.
Matani evatengesi achange achikwikwidza zvine mutsindo kune zita reBlack Friday Best Deal gore rino. Amazon yakatozarura mamwe eBlack Friday zvibvumirano, izvo zvichapera kupera kwevhiki uye kuburikidza neCyber ​​​​Monday. Tarisa Amazon's Daily Deals peji ikozvino kuti uwane mamwe anoshamisa madhiri pane zvese kubva kumidziyo yemukicheni kusvika kumapiritsi, mafoni, malaptop nezvimwe.
Chii chekutarisira paBlack Friday 2021?
Ehe, iyi ingori muromo weiyo iceberg yeakanakisa Black Friday madhiri. Ticharamba tichiona vatengesi vachifumura hurongwa hwavo mukati mechikamu chekupedzisira chegore, sekuchinja kwekudonha kwekutengesa kuenda kuBlack Friday kutengesa.
Bhonasi zano rekutenga panguva yekutengeswa kweBlack Friday yegore rino: Vatengesi vazhinji vari kupa zvidzikiso zvenguva imwe chete kana ukasaina tsamba yavo yenhau kana kuyedzwa kwenhengo yavo yekutanga. Sanganisa izvi zvidzikisiro zvenguva imwe chete nemitengo yekutengesa yezvinhu zveBlack Friday pamitengo inoshamisa, uye ipapo unove wakasununguka kuzvibvisa kana kudzima nhengo yako isati yatanga kubhadharisa.
Editor chez kure
Mharidzo pa la-manette.com kweanopfuura makore maviri, Jolie ishamwari isingaite yeKufona kweDuty neFIFA. Warzone nyanzvi kubva payakatangwa, anomirira nemoyo murefu kuti anti-cheat iwedzere kumutambo. Kuti ubate naye: [email inodzivirirwa]
Zvinyorwa zvitsva naJolie Chalut (ona zvese)
9 yakanakisa yemahara mufananidzo inoshandura software - Zvita 16, 2021
Matambudziko eWi-Fi paPlayStation 4? 8 matipi uye mhinduro dzakakodzera kuedza - Zvita 7, 2021
Maitiro ekurekodha skrini muApple iPhone 12 mini - Zvita 3, 2021
Tsvaga iyo Nyeredzi yeHondo yakavanzwa pane yekurodha skrini muFortnite Mwaka X.